ट्राफिक नियमको पालना नगरेपछि अचानक पृथ्वीमा झरे ‘यमराज’ पूरा पढ्नु होस ।। - Daily Lokmandu
Homeरोचकट्राफिक नियमको पालना नगरेपछि अचानक पृथ्वीमा झरे ‘यमराज’ पूरा पढ्नु होस ।।
July 11, 2018 रोचक Comments Off on ट्राफिक नियमको पालना नगरेपछि अचानक पृथ्वीमा झरे ‘यमराज’ पूरा पढ्नु होस ।।
एजेन्सी। भारतमा सवारी नियम उल्लघंनका घटना बढिरहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले दण्ड जरिवाना गरेपनि ट्राफिक नियम उल्लघंनका घटनामा कमी आएको छैन्।
ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्नेमा युवा बर्ग अगाडि देखिएको छ। के गर्दा ट्राफिक नियम उल्लघंनका घटनामा कमी आउँछ? यस्तोमा मृत्युका देवता ‘यमराज’ नै पृथ्वी लोकमा आएर ट्राफिक नियम पालना गर्न सम्झाएमात्र हामी सबैका आँखा खुल्छन की !
भारतको कर्नाटकको टाउन हलमा ‘यमराज’ को रुप धारण गरेर एक व्यक्ति आएर सबैलाई ट्राफिक नियमका विषयमा जानकारी दिन थाले। उनले यदि कसैले ट्राफिक नियम पालना नगरे दण्ड दिने चेतावनी पनि दिए।
उनीहरुले हेलमेट नगलाइ बाइक चलाउनु कति खतरनाक हुन्छ भनेर सम्झाउनलाई यस्तो उपाय अपनाइएको हो।
यातायात नियमका विषयमा जानरुकता फैलाउनकालागि यहाँको प्रहरीले ‘यम’ को भूमिकालाई सडकमा उतारेको हो।
बेंगलुरुमा जुलाईलाई सडक सुरक्षा महिनाका रुपमा मनाइन्छ।
प्रत्येक दिन खाली पेटमा किशमिश पानी खाँदा यस्तो अचुक फाईदा !
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,138)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (992)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (613)